Dominica နှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
●အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Dominica အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
အကောင်းဆုံး Dominica ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူသူများ နှင့်ရှေ့နေများ Dominica တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစား Dominica ရှိနိုင်ငံသားအစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
ဒိုမီနီကာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များမှနိုင်ငံသားသည်ဒိုမီနီကာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဒိုမီနီကာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနိုင်ငံသား၊ ဒိုမီနီကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဒိုမီနီကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံသား၊ ဒိုမီနီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ , ဒိုမီနီကာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်အမြဲတမ်းနိုင်ငံသား၊ ဒိုမီနီကာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနိုင်ငံသား၊ ဒိုမီနီကာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဒိုမီနီကာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဒိုမီနီကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဒိုမီနီကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်မှု၊ ဒိုမီနီကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း ဒိုမီနီကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ ဒိုမီနီကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဒိုမီနီကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသား၊ ဒိုမီနီကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသား၊ ဒိုမီနီကာစီးပွားရေး Residency အစီအစဉ်များ၊ ဒိုမီနီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် i n ဒိုမီနီကာ၊ ဒိုမီနီကာနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒိုမီနီကာနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒိုမီနီကာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်မှုနှင့်ဒိုမီနီကာ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒိုမီနီကာနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒိုမီနီကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒိုမီနီကာရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ဒိုမီနီကာရှိရွှေဗီဇာ၊ ဒိုမီနီကာရှိရွှေဗီဇာ၊ ဒိုမီနီကာရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ ဒိုမီနီကာရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဒိုမီနီကာရှိဒုတိယရွှေဗီဇာ၊ နိုင်ငံသားအဖြစ်နှင့်ဒိုမီနီကာရှိရွှေဗီဇာ၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဒိုမီနီကာရှိရွှေဗီဇာ၊ ဒိုမီနီကာရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား၊ ဒိုမီနီကာရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဒိုမီနီကာရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ဒိုမီနီကာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက် Dominica ၌အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု: အမေရိကန်ဒေါ်လာ 100,000
ကျယ်ပြန့်သောဝိသေသလက္ခဏာပန်းခြံမူဘောင်များဖြင့်လုံခြုံစိတ်ချရသောမျက်စိဖြင့်ကြည့်ရှု။ ရှင်သန်ပေါက်ဖွားသောကြောင့်ဒိုမီနီကာကို“ ကာရစ်ဘီယံသဘာဝကျွန်း” ဟုမကြာခဏခေါ်လေ့ရှိသည်။ ကျွန်းငယ်သည်အန္တာရယ်လ်ကျွန်းငယ်တွင်အငယ်ဆုံးသောကျွန်းဖြစ်သည်။ ကာရစ်ဘီယံကျွန်းသည်မြို့တော်ရို့စ်အနောက်ဘက်သို့ကန့်သတ်ထားသည်။ ကျွန်းသည်အနောက်မြောက်ဘက်တွင်ဂူဒယ်လူးနှင့်နီးကပ်စွာရှိပြီးတောင်ဘက် - အရှေ့တောင်ဘက်တွင်မာတီနီqueတည်ရှိသည်။ ဥရောပသားများ၏တိုက်ခိုက်မှုမတိုင်မီကအာရာဝါကျွန်းသည်ကျွန်းပေါ်တွင်အဓိကဘုရားဖူးများဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ပဉ္စမရာစုတွင်တောင်အမေရိကမှဝင်လာသည်။
ခရစ်စတိုဖာကိုလံဘတ်စ်ကျွန်းကိုနိုဝင်ဘာ ၃ ရက် ၁၄၃၃ တွင်တနင်္ဂနွေနေ့ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးရက်သတ္တပတ်၏နေ့နောက်ပိုင်းတွင်အမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ အင်္ဂလန်၊ ပြင်သစ်နှင့်ကလီနာဂိုအများပြည်သူတို့သည်ကျွန်းအားကြာမြင့်စွာကပင်အမှုဖွင့်ထားသည်။ ၎င်းသည် ၁၇၆၃ တွင်ဗြိတိန်သို့တရားဝင်လက်နက်ချခဲ့သည်။
နာမကျန်းမှုများနှင့်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ကယ်လီနာဂိုပြည်သူများသည်ကျွန်းကိုထိန်းချုပ်။ တောင်အမေရိကသို့ထွက်ပြေးခဲ့ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ယနေ့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် Kalinago ၂,၀၀၀ ခန့်သည်ကျွန်းပေါ်တွင်နေထိုင်ကြပြီးယေဘူယျအားဖြင့် Dominica အရှေ့ပိုင်းရှိ Kalinago နယ်မြေများတွင်နေထိုင်ကြသည်။ များသောအားဖြင့်ဒိုမီနီကာနှင့်အနီးတစ်ဝိုက်ရှိမြို့တော်များ၏အမည်များသည်မကြာသေးမီနှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ၏တိုက်ပွဲများကိုထင်ဟပ်စေသည့်ကာလီနိုဂို၊ ပြင်သစ်နှင့်အင်္ဂလိပ်တို့၏ရောနှောခြင်းဖြစ်သည်။
၁၉၇၈၊ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်တွင်ဒိုမီနီကာသည်ဂရိတ်ဗြိတိန်မှလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးဓနသဟာယမှလူတစ် ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှတို့ကကိုလိုနီခေတ်တွင်ကျွန်းနိုင်ငံသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုရုံးသုံးဘာသာစကားအဖြစ်လက်ခံခဲ့သော်လည်းဒေသခံများနှင့်ဒေသခံအနည်းငယ်သာမူပြင်သစ်လူမျိုးများနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ Dominica ၏ချက်ပြုတ်ခြင်းသည်ကရစ်ဘီယံကျွန်းများကဲ့သို့အထူးသဖြင့်ဂျမေကာ၊ စိန့်လူစီယာ၊ ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုနိုင်ငံများနှင့်တူသည်။ Veggie ချစ်သူများသည်ဒိုမီနီကာတွင်ကျွန်းပေါ်တွင်မြေဆီလွှာပေါများသောထုတ်ကုန်များရှိသောကြောင့်အစားအစာများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကိစ္စများစွာရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်းပေါ်ရှိအနံ့အရသာများဖြင့်အရသာရှိသောအနီးအနားရှိထွက်ကုန်များနှင့်အတူအစားအစာကိုခရိုင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့်တည်ဆောက်သည်။ ဒိုမီနီကာသည် visitors ည့်သည်များကိုဆက်ဆံရန်ထုံးစံရှိသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောလူမှုစီးပွားရေးကဲ့သို့သောနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဒိုမီနီကာ၏အခြေခံပစ္စည်းများအတွက်ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်မှာပျမ်းမျှအားဖြင့်နိမ့်သည်။ နေ့စဉ်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်မျှော်လင့်ချက်များကိုများသောအားဖြင့်လက်ခံကြပြီးစီးပွားရေးတည်ငြိမ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည်။ ကုန်ပစ္စည်း၊ တည်းခိုခန်းနှင့်အပန်းဖြေစသည့်နိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအခြေခံအားဖြင့် ပို၍ နိမ့်သည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအုပ်ချုပ်ရေးများ၊ ပါဝါ၊ ရေ၊ သာယာဝပြောရေး၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့်စာပေးစာယူစီမံအုပ်ချုပ်မှုများသည်လူ ဦး ရေအားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောလူမှုစီးပွားရေးကဲ့သို့သောနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဒိုမီနီကာ၏အခြေခံပစ္စည်းများအတွက်ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်မှာပျမ်းမျှအားဖြင့်နိမ့်သည်။ အခြေခံပစ္စည်းများအတွက်ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်သည်လူများ၏နေထိုင်မှုပုံစံနှင့်လူနေထိုင်ရာဒေသအပေါ်တွင်များစွာမူတည်သည်။ လူတစ် ဦး သည်၎င်းတို့လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်မှန်ကန်သောဒေသများကိုရွေးချယ်သောချွတ်ယွင်းသောအခွင့်အရေးအပေါ်အလွယ်တကူနေထိုင်နိုင်သည်။ နေ့စဉ်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုအတွက်မျှော်လင့်ချက်များကိုများသောအားဖြင့်လက်ခံကြပြီးစီးပွားရေးတည်ငြိမ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအန်တီဂွာ၊ ဘဟားမား၊ ဘာဘေးဒိုးစ်၊ ပစ္စည်းများ၊ တည်းခိုခန်းများနှင့်အပန်းဖြေမှုများသည်အခြေခံအားဖြင့်ပိုမိုနိမ့်ကျသည်။
ရေ၊ ရေ၊ သာယာဝပြောရေး၊ လေ့ကျင့်မှုနှင့်စာပေးစာယူစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကိုလူ ဦး ရေတစ်ခုလုံးရရှိနိုင်သည်။ (၉၄) ရာခိုင်နှုန်းသောပညာရေးနှုန်းထားကိုနိုင်ငံအနေဖြင့်ထိန်းထားနိုင်ပြီး၊ အစိုးရထောက်ပံ့သောကျောင်းများသည်အစိုးရမှငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဖြင့်ပညာရေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်မှာနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်သည်။ နက်နဲသည့်ရာသီဥတုတွင်စာပေးစာယူကုန်ကျစရိတ်သည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။ ကွန်ယက်သာယာဝပြောရေးစီမံခန့်ခွဲမှုများသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ ပုဂ္ဂလိကသာယာဝပြောရေးအုပ်ချုပ်ရေးကိုညွှန်ကြားထားသည်။ သာယာဝပြောရေးareaရိယာသည်သာယာဝပြောရေးပညာရှင်များမလုံလောက်မှုကိုကြုံတွေ့ရသော်လည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာ၏စံသတ်မှတ်ချက်ကိုသြဇာသက်ရောက်ခြင်းမရှိသော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်ကျွန်းများအပေါ်တွင်အံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ ရုံးများသည်လက်ရှိနှင့်ခေတ်နောက်ကျပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်းပေါ်တွင် အခြေခံ၍ စဉ်းစားခြင်းနှင့်ကျွန်းပေါ်ရှိလက်လှမ်းမမီသောအထူးစီမံအုပ်ချုပ်မှုများအတွက်လူနာများအတွက်အိမ်နီးချင်းကျွန်းရုံးများတွင်အရေးပါသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိရန်စီစဉ်ထားသည်။ ဒိုမီနီကာ၏အနာဂတ်နှုန်းသည် ၇၄ နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ များသောအားဖြင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီသည်ကျေနပ်လောက်သောစိတ်ကျေနပ်မှုကိုတန်ဖိုးထားကြသည်။ ဒိုမီနီကာသည်အသက် ၂၂ နှစ်ကျော်သူများနေထိုင်ရာဒေသဖြစ်သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်ဒိုမီနီကာသည်ဗြိတိသျှသုတေသနအဖွဲ့အစည်းသစ်စီးပွားရေးဖောင်ဒေးရှင်းမှတစ်ဆင့် ဦး ဆောင်သည့်ပျော်ရွှင်သောပြည်သူ့အညွှန်းကိန်းတွင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိစတုတ္ထမြောက်ရွှင်လန်းဖွယ်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။
အနီးအနားရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးမတူကွဲပြားသောနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကုန်ကျစရိတ်မှာအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ကျွန်းပေါ်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးများကိုလက်ခံနိုင်သည်။ အခြားမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးပိုင်ဆိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်မှာသိသိသာသာမြင့်မားပြီးအများစုမှာဘဏ်၏ငွေကြေးများကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အထူးသီးသန့်ယာဉ်အရေအတွက်သည်မကြာသေးမီ ၁၀ နှစ်အတွင်းလိုအပ်ချက်ထက်ပိုမိုလိုအပ်လာသည်။
အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်လုပ်ငန်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်သည်ဇီဝအင်အားကြီးမားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တက်ကြွနေသည်။ ထုတ်ကုန်များရုတ်တရက်တိုးချဲ့ခြင်းသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီအားဘဝအပြောင်းအလဲတစ်ခုရရှိရန်၊ သူတို့၏အသုံးစရိတ်များကိုစနစ်တကျနှင့်လက်ခံနိုင်သောဘဝလမ်းစဉ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်သည်တင်သွင်းမှုအပေါ်များစွာမူတည်သည်။ သို့သော်ခရိုင်ပြင်ပမှကုန်ပစ္စည်းများကုန်ကျစရိတ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အတူလက်တွေ့ကျသောဖန်တီးမှုနှင့်တိုးတက်မှုအတွက်အကျိုးအမြတ်ကိုတိုင်းပြည်ကအကျိုးရှိစေသည်။ ကုန်လွန်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများမှကုန်ကျစရိတ်များပြားလာသော်လည်းပစ္စည်းများကိုသူတို့တောင်းခံသူများထံမှဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီးဖွင့်နိုင်သည်။
ဒိုမီနီကာ၏နိုင်ငံအများစုအပေါ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းမှာရေအားလျှပ်စစ်နှင့်ဘူမိအပူစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်ဘူမိအပူစွမ်းအင်နှင့်ရေအားလျှပ်စစ်ကို အသုံးပြု၍ စျေးနှုန်းချိုသာသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်တိုးတက်နေပြီး၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးရလိမ့်မည်။ လက်ရှိတွင်နိုင်ငံ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုရေအားလျှပ်စစ်မှတစ်ဆင့်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိပြီးတိုးတက်မှုအလားအလာများစွာရှိသည်။ ထို့အပြင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုများစွာအသုံးမပြုသော်လည်း၎င်းအားရေပူနွေးစေရန်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် (လျှို့ဝှက်စွာနှင့်ငွေကြေးအရ) အသုံးပြုသည်။ ဤအစီအစဉ်အရလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရန်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကိုထောက်ပံ့ရန်လစ်ဘရယ်အားဖြင့်တွန်းအားပေးသည်။ ထို့နောက်များစွာသောစွမ်းအားကိုအနီးအနားရှိမူဘောင်ဝင်ငွေမှရရှိသောအမြတ်သို့ပြန်လည်ရောင်းချနိုင်လိမ့်မည်။ ဂြိုလ်တုတီဗီနှင့်စာပေးစာယူစီမံခန့်ခွဲမှု (ဝဘ်၊ ဆဲလ်၊ ကြိုးလိုင်း) သည်ကျွန်းတစ်ကျွန်းလုံးသို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ ဒိုမီနီ
အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရွေးချယ်စရာများ Dominica ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသား
လှူဒါန်းမှု / အိမ်ခြံမြေ
အဘယ်ကြောင့် Dominica ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ဘို့သွားကြဖို့
ကျွန်း၏မွှေးကြိုင်သောသဘာဝအလှအပ၊ ကာရစ်ဘီယံတွင်လူနေမှုအဆင့်အတန်းအမြင့်ဆုံးနှင့်အလွယ်တကူရနိုင်သောရွှေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမိန့်နှင့်ဒိုမီနီကန်နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုလူကြိုက်များစေသည်။ သင့်အနေဖြင့် Dominica လျှောက်လွှာလျှောက်လွှာကိုသင်လက်လှမ်းမမှီပါ။ သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအတည်ပြုပါကသင်နေထိုင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ထို့အပြင်နေထိုင်သူမဟုတ်သောကြောင့်ဒိုမီနီကာသည်အခွန်မပေးဆောင်နိုင်ပါ။ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းသည်သင်နှင့်သင်ချစ်ရသူများအားအီးယူနှင့်အခြားနိုင်ငံ ၁၀၀ ကျော်အတွက်ဗီဇာပေးသည်။
ငွေရေးကြေးရေးမှီခိုသောမိသားစုဝင်များသည်သင်၏လျှောက်လွှာတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ သို့မှသာသင်၏ပတ်စ်ပို့အသစ်၏သက်သောင့်သက်သာနှင့်လုံခြုံမှုကိုသင်နှင့်အတူရှိသူများအားတိုးချဲ့နိုင်သည်။ အသက် ၂၈ နှစ်အောက်ကလေးများအပြင်မှီခိုနေသည့်မိဘများနှင့်အဖွား ၅၅ ခုကျော်။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှု Dominica မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့် insite
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒိုမီနီကန်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို ၃-၄ လကြာသည်။ ၎င်းသည်ယခင်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံသို့မဟုတ်အရည်အချင်းမလိုအပ်ပါ။ သင့်တွင်ကျန်းမာသောသန့်ရှင်းသောငွေတောင်းခံမှု၊ ရာဇ ၀ တ်မှုတရားနှင့်အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှတစ်ဆင့်ဒိုမီနီကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ရေးအတွက်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာသင်လှူဒါန်းမှုကိုအစိုးရမဟုတ်သောရန်ပုံငွေသို့လျှောက်ထားသူတစ် ဦး လျှင်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀ ပြန်ပေးနိုင်သည်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အစိုးရခွင့်ပြုထားတဲ့အပန်းဖြေစခန်းမှာအိမ်ခြံမြေကိုအနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၂၀၀,၀၀၀ ၀ ယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအလှူငွေကိုအနည်းဆုံးသုံးနှစ်ထိန်းသိမ်းထားရမယ်၊ ဒါပေမယ့် ၅ နှစ်အတွင်းမှာရောင်းရင်နောက်ထပ်ဝယ်သူကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရလိမ့်မယ်။
ထို့အပြင် $ 11,250 ၏ပြန်အမ်းခြင်းမရှိသောတရားသဖြင့်စီရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရွေးချယ်စရာများကိုရည်ညွှန်းသည်။ နိုင်ငံတော်အခွန်ပေးဆောင်ရန်အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ သာပေးလိမ့်မည်။
ဤနေရာတွင်တင်ပြထားသည့်ပမာဏသည်လျှောက်ထားသူတစ် ဦး တည်းကိုရည်ညွှန်းပြီးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုလျှောက်လွှာတွင်ပါ ၀ င်သောမိသားစုဝင်အရေအတွက်နှင့်အသက်ကွာခြားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နိုင်ငံသားအဖြစ် Dominica အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ဒိုမီနီကာအဘို့ ဒိုမီနီကာမှဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်ထောက်ခံရန်ဒိုမီနီကာမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ Dominica မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဒိုမီနီကာမှဒိုမီနီကာမှ Golden Visa သို့မဟုတ်ဒိုမီနီကာသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မှနိုင်ငံသားဖြစ်မှုတို့ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ Dominica သို့မဟုတ် offshore၊ Dominica ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ဘဏ္planningာရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို Dominica နှင့်အလယ်တန်းနေထိုင်သူများမှနိုင်ငံသားအခြေပြုဖြေရှင်းမှုများဖြင့်ကူညီခြင်း။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်နိုင်ငံသား ငါတို့တတ်နိုင်မှတဆင့် Dominica အဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ဒိုမီနီကာအတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ၊ ဒိုမီနီကာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်သောနိုင်ငံသား၊
နိုင်ငံသားအဖြစ်ကို Dominica မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒိုမီနီကာရှိရွှေဗီဇာ။
ဒိုမီနီကာမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ဒိုမီနီကာမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒိုမီနီကာရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်သည် Dominica မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များ။
ဒိုမီနီကာမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
Dominica မှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအထိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
အိမ်ခြံမြေမှတဆင့် Dominica ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသား
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအားဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ပြုလုပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှထွက်ခွာလိုပါက ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်ဒိုမီနီကာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ကောင်းမွန်သောအကျိုးအမြတ်ရရှိသင့်သည်ဟူသောအမြင်ဖြင့်ဒိုမီနီကာရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Dominica ရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေထုတ်လုပ်သူအနည်းငယ်နှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးသူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ Dominica ရှိကောင်းသောနေရာများတွင်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးသောအမြတ်အစွန်းများကိုရရှိစေသည်။
Dominica ရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူ Dominica အတွက်အကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များ။
သိရန်လိုအပ်သည် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Dominica နိုင်ငံသား
Dominica အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေရှေ့နေ၏နိုင်ငံသားက Dominica သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏အောင်မြင်သောနိုင်ငံသားအတွက်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ Dominica သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
မည်သည့်အကြံပြုချက်များကိုအခြေခံရမည်ကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ဒိုမီနီကာသို့မဟုတ်ဒိုမီနီကာသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုရရှိရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်ဖောက်သည်များအားဒိုမီနီကာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်ကန ဦး Due Diligence ကိုပြုလုပ်သည်။
Dominica အတွက်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အစီအစဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို Dominica အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လျှောက်ထားရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖောက်သည်များနှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုသည်။
Dominica အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Dominic နှင့်ရွှေဗီဇာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ဖြည့်စွက်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
သင်၏မိသားစုနှင့် Dominic အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးပါက၎င်းကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်ဖြည့်ပါလိမ့်မည်။
Duration: 8-10 လအတွင်း
သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို Dominica ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်လျှောက်ထားပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့်ကောင်းသောသတင်းကိုမျှဝေပြီးအခြားအထောက်အပံ့များအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ဒိုမီနီကာရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် Dominica များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်ဒိုမီနီကာမှလက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများအားကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် Dominica များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖြင့်ဖြစ်သည် ဒိုမီနီကာတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်ဒိုမီနီကာအတွင်းသို့မဟုတ် ၀ င်ရောက်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားစက်မှုစောင့်ကြပ်ခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် Dominica အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ဒိုမီနီကာတွင်တရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ဒိုမီနီကာအဘို့ ဒိုမီနီကာရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် Dominica များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဒိုမီနီကာရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး၊ ဒိုမီနီကာတွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်လုပ်ကိုင်သောဒိုမီနီကာတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဒိုမီနီကာကိုထောက်ပံ့မှုမရှိပါ
နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ဒိုမီနီကာအဘို့ တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နိုင်ငံသားအဖြစ် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ဒိုမီနီကာအဘို့ ဒိုမီနီကာရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဒိုမီနီ ဒိုမီနီကာရှိအပြာစာပေများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသား ဒိုမီနီကာအတွက်ရှေ့ရပျ ဒိုမီနီကာရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများကိုစီးပွားရေးမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ဒိုမီနီကာနှင့် KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုသေချာစေရန်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ထားသော်လည်းဒိုမီနီကာအာဏာပိုင်များမှလျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်အတွက်ငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နိုင်ငံသားအဖြစ် ဒိုမီနီကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းများအတွက် Dominica တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်သည့် Dominica အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့် Dominica အတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်ဈေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
သင်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ကတိသစ္စာပြုထားသည့် Dominica ကိုင်တွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်လျှောက်လွှာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အကောင်းဆုံးရှေ့ရွက်နှင့်ကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။
သင်၏နိုင်ငံသားအဖြစ် Dominica မတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ဒိုမီနီကာအားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရပံ့ပိုးမှုအတွက်ပြုလုပ်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Dominica အပါအဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုတွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိပြီးအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိသုံးစွဲသူများအားကူညီပေးနေသည်။
အကယ်၍ ဒိုမီနီကာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက် Dominica သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တွက်ချက်ပါ
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုဒိုမီနီကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တွက်ချက်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ မိသားစု ၀ င်များနှင့်သူတို့၏အသက်များအပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပါ။ Dominica အတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ Dominica အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့်အခြားအခကြေးငွေများအရနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ဒိုမီနီကာအဘို့
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ဒိုမီနီကာတွင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်၏မိသားစုနှင့်အတူဒိုမီနီကာသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာနှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်၊ Dominica တွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်မည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းအပြင် Dominica အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Dominica နှင့်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ Dominica နှင့်အခြားနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားတစ်နေရာတည်းတွင်ပြုလုပ်သော Dominica အတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကပေးသောထီးတစ်ခုအောက်တွင်သင်ရှာမရနိုင်ပါ။
မိသားစုများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်အတွက်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဒိုမီနီကာနှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများဖြင့် Dominica ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုကျော်လွန်သောနည်းလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ Dominica တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ or Offshore နှင့် 106 နိုင်ငံများ (ဒိုမီနီကာရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပိုမိုသက်သာသည်။ )
Dominica သို့ပြောင်းရွှေ့လာသည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် Dominica ရှိကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် Dominica ရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incine သင်အဘို့, Dominica အတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် ဒိုမီနီကာအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် Dominica ရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
နိုင်ငံသားအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် မင်းအစီအစဉ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒိုမီနီကာ Dominica ရှိရှိပြီးသားစီးပွားရေးကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ Dominica အတွက်ချက်ချင်းစတင်ဘို့။
Dominica ရှိ HR ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ Dominica ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ဒိုမီနီကာအတွက်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Dominica အတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
Dominica အတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ Dominica အတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, Dominica အတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
Dominica ရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
နိုင်ငံသားခံယူပြီးနောက် Dominica သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်၊ အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဒိုမီနီ.
အောက်ဖော်ပြပါအိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများကို Dominica တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးပါသည်
ဒိုမီနီကာတွင် Web Design
ဒိုမီနီကာတွင် web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Dominica ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Dominica ရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမီနီကာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြေများအားဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဒိုမီနီကာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်၊ ဒိုမီနီကာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ဒိုမီနီကာတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များထားရှိသည်။ Dominica တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်သူတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုများ။ Dominica အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်လိုင်း၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ဒိုမီနီကာတွင်နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ရှိသည်၊ ဒိုမီနီကာ၌သင်နေထိုင်ခွင့်ကိုအတည်ပြုပြီးသည်။
ဒိုမီနီကာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်၏ကိုယ်စားတရားဝင်လုပ်ရပ်များအတွက် Dominica အတွက်ရှေ့နေသည်လိုအပ်သည်။ သင်သည်ဒိုမီနီကာသို့ရောက်နေလျှင်သို့မဟုတ်ဒိုမီနီကာသို့သွားရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ရှေ့နေအားဤတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ အကယ်၍ သင် Dominica အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင်၏ဒိုမိန်းအားတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုသင့်ပြီး Dominica ပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုအက်တင်တင်သို့မဟုတ်ဒိုမီနီကာကောင်စစ်ဝန်ရုံးကတရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ဒိုမီနီကာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ဒိုမီနီကာ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဒိုမီနီကာ၏နေထိုင်မှုကို Dominica သို့နေထိုင်ခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ Dominica သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းအတွက်လျှောက်ထားခြင်း၊ ဒိုမီနီကာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနေထိုင်မှု၊ ဒိုမီနီကာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှထောက်ပံ့ခြင်း၊ ဒိုမီနီကာ၌တည်၏။
Dominica အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် Dominica ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်း Dominica ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်မှု ဒိုမီနီကာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် Dominica အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၏နေထိုင်မှု
နိုင်ငံသားအဖြစ်ကို Dominica သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့် Dominica ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဖြင့်စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့် Dominica ၏နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဒိုမီနီကာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဒိုမီနီကာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားကထောက်ပံ့သောဒိုမီနီကာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဒိုမီနီကာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဒိုမီနီကာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ဒိုမီနီကာရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
Dominica အတွက်စျေးသက်သာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ Dominica ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ Dominica ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ Dominica ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ Dominica အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေး Dominica အတွက်စျေးသက်သာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ဒိုမီနီကာ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုခြင်းဖြင့်ဒိုမီနီကာ၏တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်သည်ဟုဒိုမီနီကာနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဒိုမီနီကာ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ဒိုမီနီကာ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်ဒိုမီနီကာ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံများ၊ ဒိုမီနီကာ၏အကောင်းဆုံးဒုတိယပတ်စ်ပို့ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဒိုမီနီကာရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတဆင့်။
Dominica အတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု ဒိုမီနီကာရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ဒိုမီနီကာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဒိုမီနီကာရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ဒိုမီနီကာအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
စီးပွားဖြစ်၊ အိမ်ခြံမြေစသည်တို့ဖြင့်ဒိုမီနီကာ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဒိုမီနီကာ၏နေထိုင်ခွင့်ကိုရရှိခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ ဒိုမီနီကာရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ဒိုမီနီကာရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်ဒိုမီနီကာအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ဒိုမီနီကာရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဒိုမီနီကာရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်
Dominica အတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ဒိုမီနီကာရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ဒိုမီနီကာရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ဒိုမီနီကာရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ Dominica အတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်အတွက် Dominica ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒိုမီနီကာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်တရား ၀ င်အထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည် Dominica သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက် Dominica အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များသည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ Dominic မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်တိုင်ပင်ကြေးကိုသာပေးပြီး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအခြားထောက်ပံ့မှုများစွာပေးသည်။
မည်သည့်နိုင်ငံသားများသည် Dominica သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ် Dominica သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဗီဇာဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ရန်လျှောက်ထားနိုင်သနည်း။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအာရှမှဒိုမီနီကာမှနိုင်ငံသား၊ အာဖရိကမှဒိုမီနီကာမှနိုင်ငံသား၊ ဥရောပမှဒိုမီနီကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ တောင်အမေရိကမှဒိုမီနီကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မလေးရှားမှဒိုမီနီကာမှနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှဒိုမီနီကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ အင်ဒိုနီးရှားမှဒိုမီနီကာနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ သီရိလင်္ကာမှဒိုမီနီကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ နီပေါမှဒိုမီနီကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ အိန္ဒိယမှဒိုမီနီကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား ယူအေအီးမှဒိုမီနီကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ပညာရေး၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခြင်း၊ အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းသင်တန်းနှင့်အမျိုးသားထူးချွန်မှု
အုပ်ချုပ်မှု၊ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၊ နိုင်ငံသားစွမ်းအားမြှင့်တင်ရေး၊ လူမှုတရားမျှတရေးနှင့်ဒေသန္တရရေးရာများ
ပတ် ၀ န်းကျင်၊ ကျေးလက်ဒေသအဆင့်မြှင့်တင်မှုနှင့် Kalinago ဓာတ်လှေကား
ကုန်သွယ်ရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှု၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ စီးပွားရေးနှင့်ပို့ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဘဏ္ာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စီမံကိန်း၊ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အသံလွှင့်ဌာန
လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊ အန္တရာယ်ရှိသည့်လူငယ်များ၊ ကျား၊ မရေးရာ၊
link ကိုမှ ဒိုမီနီကာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ဒိုမီနီကာတွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်